Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Briten: Wepụ anyị n'ụlọ pụọ na ezumike
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • nzukọ • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ UK na -agbasa
Ndị mmadụ na-arapara nke ukwuu n'ime ụlọ ruo ọtụtụ ọnwa na njedebe na nyocha a na-egosi anyị na ha na-arịa ọrịa ịhụ mgbidi anọ ha.
Ihe karịrị ọkara nke ndị okenye UK ndị na-ekwu na ha ka mma ugbu a karịa ka ọ dị tupu ọrịa Covid ga-eji ego mgbakwunye ahụ gbasaa na ezumike na 2022, nyocha nke WTM London weputara taa (Monday 1 November).
Otu n'ime mmadụ ise n'ime mmadụ 1,000 na-aza na mkpesa Industrylọ Ọrụ WTM 2021 kwuru na ha ka mma karịa ka ha dịbu tupu Covid, mgbe ọpụpụ dị elu.
Mgbe a jụrụ ya: "N'ụzọ ego, ị ka mma ka ọ bụ njọ kemgbe mmalite nke ọrịa a?", ọtụtụ ndị zara (62%) kwuru 'banyere otu'; 20% kwuru na ha ka mma yana 18% ka njọ. A gwara ndị na-aza ajụjụ ka ha tụlee ma ego ha nwetara na ọpụpụ na nzaghachi ha.
Mgbe a jụrụ ndị kwuru na ha ka mma ugbu a, sị: “Gịnị ka ị na-eme atụmatụ imefu ego ọzọ?” ezumike pụtara dị ka azịza kachasị elu, na 55% na-ekwu na ha na-eme atụmatụ iji ya na-ede akwụkwọ njem. Ọnụọgụ a fọrọ nke nta ka ọ bụrụ okpukpu abụọ karịa azịza kacha mma, ebe 31% nke ndị dị mma karịa ka ha dịbuburu COVID kwuru na ha ga-emefu ya na ndozi ụlọ.
Otu onye kpachara anya n'ime anọ (pasent 28) kwuru na ha "ga-edobe ego ahụ n'ụlọ akụ maka ụbọchị mmiri ozuzo"; 26% kwuru na ha ga-emefu ya na friji ọhụrụ ma ọ bụ ihe yiri ya na ụdị ngwaahịa ọcha na 21% ga-azụta ụgbọ ala ọhụrụ. Ihe dị ka otu n'ime 10, (12%) kwuru na ha ga-etinye ego ahụ maka ịzụrụ ụlọ ọhụrụ.
Ọbụna na-agba ume karịa maka ụlọ ọrụ njem, ọnụ ọgụgụ dị ịrịba ama ka ekpebibeghị ma ndị ọrụ nlegharị anya na ebe ndị na-aga njem nwere ike ịrata ha itinye ego ha na ezumike. N'ime ndị na-ekwu na ha ka mma kemgbe COVID malitere, 7% 'echeghị echiche' ihe ha ga-eji ego ahụ eme.
Onye isi ihe ngosi WTM London Simon Press kwuru, sị: “Nke a bụ egwu na-ege ntị ụlọ ọrụ njem. Onye nwere ihu ọma n'ime mmadụ ise nke UK na-ahụta onwe ya na ego ka mma karịa ka ọ dị na mbụ Covid, n'ihi na ha nwere 'ego mberede' na ụgwọ ụlọ dị ala.
"Ndị mmadụ abanyela n'ime ụlọ ruo ọtụtụ ọnwa na njedebe na nyocha a na-egosi anyị na ha na-arịa ọrịa ịhụ mgbidi anọ ha.
"Kama imefu ego n'ịrụzi ụlọ ma ọ bụ igwe ịsa ahụ ọhụrụ na-egbuke egbuke, ha na-achọ ịpụ apụ na ime ihe kachasị mma ná ndụ ugbu a mgbochi na-ebelata. Kedu ụzọ dị mma isi pụọ na ya niile karịa akwụkwọ ezumike?
"Anyị amatalarị na a na-achọsi ike maka njem mba ofesi na ebe ha na-aga ga na-adaba n'otu n'otu maka ịsọ mpi iji dọta ego nke ndị nwere ego ha ga-eji gbaa ọkụ na ndị nwere ike ịzụ ahịa ma na-agbapụ na ezumike ọzọ ha. .
"Kedu ihe ọzọ, na 7% ọzọ na-ekwu na ha echebeghị ihe ha ga-eji ego ha ga-eme, ụlọ ọrụ njem nwere ike ịbanye maka nnukwu iberibe achicha ikuku Covid dị ụtọ."